EISEN INDUSTRY LIMITED (KUANGYE DONGGUAN TECHNOLOGY CO., LTD) iri muLianhu Village, Tangxia Town, Dongguan City ine zvifambiso zviri nyore, iine nzvimbo yekuvaka inopfuura zviuru zvishanu zvemamirimita.
Parizvino, yemuchina michina michina inosanganisira: 10 otomatiki gungano mitsara, inopfuura makumi mana inoraswa masiki ekurapa & KN95 FFP2 otomatiki ekugadzira mitsara, yakazara magetsi murabhoritari,
uye kumisikidzwa kwechitatu-bato yakasimbiswa 100, - 000-chikamu isina guruva isina musangano, 10,000-nhanho yekurapa rabhoritari, nezvimwewo Simba rekugadzira kugona uye rakanyatsodzidziswa timu revashandi. Muna Kurume 2020, iyo kambani
akapasa iyo ISO13485 & GMP zvekurapa mudziyo mhando system chitupa, uye muna Chivabvu 2020 yakawana rezinesi reClass II rezvokurapa rekugadzira chigadzirwa, uye iyo chigadzirwa chakapasa kubvumidzwa kwemhuri uye kwepasi rese
nyanzvi masangano. EISEN INDUSTRY LIMITED inoenderera mberi ichiita hunyanzvi hwekuvandudza uye inodzamisa shanduko yemhando system, ichiisa hwaro hwakasimba hwekuzadzikiswa kwemaonero edu emakambani. Regai munhu wese afarire hutano uye runako!
Kuti tive nechokwadi chekuchengetedza uye mhando yezvigadzirwa kubva kunobva, isu takanyatso sarudza iyo indasitiri's yepamusoro mbishi yezvinhu vatengesi venguva refu mushandirapamwe uye vakasainwa uye vakatendeka chibvumirano chevatengesi nevanopfuura makumi maviri.
Isu takatora chikamu mukuratidzira kwakawanda muChina, uye vatengesi vanobva kuChina vanofarira zvikuru zvigadzirwa zvedu.
Fekitori yedu yese inotora musangano usina guruva, mushure medu dhipatimendi rekuchengetedza renyika, ingave michina, zvishandiso kana vashandi zuva rega rega vanoita basa rakanaka, disinfection yakanaka uye vanochengeta hutano hwakanyarara, sezvo zvese zvese zvemanyuko, isu kunyatso chengetedza kushandiswa, ita basa rakanaka mune yega link yekubata, nekusimbisa pazvigadzirwa uye vese vashandi vehutano dziviriro yepakati index.
Iyo kambani inobata neese madhiri ebasa neanoonga maitiro uye maitiro. Zvichakadaro, chigadzirwa chekutanga chinogara chiine hanya yedu nedenda mamiriro uye minamato yekukurumidza mhinduro.
Rudzi rwebhizinesi ------ Mugadziri
Nyika / Dunhu-- Guangdong, China
Main Zvigadzirwa-- Disposable Medical Face Mask (Non-Aseptic), Disposable Face Mask, KN95 Public Mask, FFP2 face mask, Medical Protective Mask, Non-Contact Infrared Thermometer
Uridzi ------ Yakavanzika Muridzi
Vashandi Vese --- 101 - 200 Vanhu
Yakazara Yegore Revenue-- zvakavanzika
Gore Rakamisikidzwa --- 2019
Certification (1) - ISO13485
Main Misika - Africa 35.00%
Saizi yeFekitori 3,000-5,000 mativi emamita
Fekitori Nyika / Nharaunda Kamuri 501 Kuvaka 1, Nha. 1 Dong Yuan Wu Lu Rod, Lianhu, Tengxie TownDngguan Cry, Guangdong ProinceChine
Kwete yeMakambani Ekugadzira Pamusoro pegumi
ContractManufacturing OEM Sevhisi YakapihwaDesign Sevhisi YakapihwaMutengi Label Yakapihwa
Yegore Rinobuda Kukosha Pamusoro peUSS100 Mllion
Yegore Negore Kugadzira Unyanzvi
ChigadzirwaName ChigadzirwaLineCepecity ActualUnitsProduced (PreviousYear) Yakavimbiswa
Aseptic) 2000000Units / Mwedzi 20000000 Zvikamu √
DisposableFaceMask 2000000Units / Mwedzi 10000000 Zvikamu √
KN95PublicMask 500000Units / Mwedzi Zvikamu 3000000 √
MedicalProtectiveMask 500000Units / Mwedzi Zvikamu 3000000 √
Kwete-YekubatanaInfraredThermometer Zvikamu zana / mwedzi Zviyero 1000000 √